Wasiirka Kuxigeenka Horumarinta Magaalooyinka Iyo Dhismaha Warshadaha DDSI Oo Sheegay In Caawa Laga Tijaabiyay Mashruuca Laydhka Wadooyinka Ee Cad-Ceeda(Solar-ka) Magaalada Qabridahare - Cakaara News
Wasiirka Kuxigeenka Horumarinta Magaalooyinka Iyo Dhismaha Warshadaha DDSI Oo Sheegay In Caawa Laga Tijaabiyay Mashruuca Laydhka Wadooyinka Ee Cad-Ceeda(Solar-ka) Magaalada Qabridahare
Qabridahare(CN) Axad.Feb.01.2015, sida aan wada ogsoonahay xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha warshadaha ayaa waday mashruuca laydhka wadooyinka ah ee cad-ceeda kushaqaynaya (solar-ka ), Kaasoo kamida qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaale iyo kor u qaadida bilicda magaalooyinka.
Wasiir kuxigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha warshadaha mudane Axmed Shugri Cabdi oo ay shabakada wararka ee CakaaraNews wax ka waydiisay arintan ayaa sheegay in magaalada Qabridahar Caawa si toos ah loo tijaabiyay mashruuca laydhka wadooyinka ee cad-ceeda kushaqeeya.
Wasiirka ayaa carabka ku dhuftay in mashruucani uu dheerarkiisu dhanyahay 3 km oo ah labada wado ee halbawlaha u ah magaalada Qabridahare. Mudane Axmed Shugri ayaa intaasi kudaray in mashruuca goor dhawna xadhiga laga jari doono.
Mashruuca noocan ah oo Geeska Afrika markii ugu horeysey DDSI ka hirgalisay islamarkaana dal ahaan loo qaatay mashruuc kudayasho mudan (best Practices) ayay xukuumadu kafulisay qaar kamida magaalooyinka deegaanka iyadoo walina uu socdo mashruucani.
Sidoo kale mashruucani wuxuu bilicda iyo faaiidooyinka kale dheer yahay kharashka oo aan la isticmaalaynin maadaama la isticmaalayo tamarta qoraxda oo ah habka uu kushaqaynayo.